"Happy Customer" Captain ကိုအောင်မြင့်မိုးနှင့် အင်တာဗျူး | CarsDB
"Happy Customer" Captain ကိုအောင်မြင့်မိုးနှင့်...
"Happy Customer" Captain ကိုအောင်မြင့်မိုးနှင့် အင်တာဗျူး
MyanmarCarsDB.com ကိုအသုံးပြုပြီး ကားအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Captain ကိုအောင်မြင့်မိုးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ရာမှာ..
- မင်္ဂလာပါအကို.. အကို့နာမည်လေးသိပါရစေ။
ကျွန်တော့နာမည် Captain အောင်မြင့်မိုးပါ။ ကားအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေပါတယ်.။
- ဘယ်အချိန်မှာ MyanmarCarsDB ကို စသုံးဖြစ်ပါသလဲ?
2012 January MyanmarCarsDB.com စတင်လည်ပတ်ကတည်းက စသုံးခဲ့တာပါ.။
- ဟုတ်ကဲ့အကို၊ Website ပေါ်မှာ ကားဘယ်နှစီးလောက် တင်ပြီးပါပြီလဲ?
အစီး 200 ကျော်တင်ပြီးပါပြီ.။
- Website မှာတင်ပြီးတဲ့အခါ အချိန်ဘယ်လောက်အတွင်း ရောင်းထွက်သွားပါသလဲ?
ပျမ်းမျှအနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် (၂)ပတ်လောက်အတွင်း ရောင်းထွက်ပါတယ်.။
- MyanmarCarsDB ကိုအသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေပါရဲ့လား? အကြံပြုချင်တာများရှိပါသလား?
သုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်.။ ပြဿနာမရှိပါဘူး.။ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့ information တွေကို များများတင်ပေးစေချင်တယ်.။ ပြည်တွင်းကားလောကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ အစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့ပေါ်လစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေတင်ပေးရင် ပိုအဆင်ပြေပါမယ်.။
- ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ခုလိုဖြေကြားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Captain ကိုအောင်မြင့်မိုးနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ကားအရောင်းအဝယ်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် - 09 731 765 08, Email: aungmyinmoe@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.။
MyanmarCarsDB.com ကိုအသုံးပွုပွီး ကားအရောငျးအဝယျလုပျငနျးမြား လုပျကိုငျနတေဲ့ Captain ကိုအောငျမွငျ့မိုးနဲ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးဖွဈခဲ့ရာမှာ..
- မင်ျဂလာပါအကို.. အကို့နာမညျလေးသိပါရစေ။
ကြှနျတော့နာမညျ Captain အောငျမွငျ့မိုးပါ။ ကားအရောငျးအဝယျလုပျငနျးကို လုပျကိုငျနပေါတယျ.။
- ဘယျအခြိနျမှာ MyanmarCarsDB ကို စသုံးဖွဈပါသလဲ?
2012 January MyanmarCarsDB.com စတငျလညျပတျကတညျးက စသုံးခဲ့တာပါ.။
- ဟုတျကဲ့အကို၊ Website ပျေါမှာ ကားဘယျနှစီးလောကျ တငျပွီးပါပွီလဲ?
အစီး 200 ကြျောတငျပွီးပါပွီ.။
- Website မှာတငျပွီးတဲ့အခါ အခြိနျဘယျလောကျအတှငျး ရောငျးထှကျသှားပါသလဲ?
ပမျြးမြှအနနေဲ့တှကျမယျဆိုရငျ (၂)ပတျလောကျအတှငျး ရောငျးထှကျပါတယျ.။
- MyanmarCarsDB ကိုအသုံးပွုရတာ အဆငျပွပေါရဲ့လား? အကွံပွုခငျြတာမြားရှိပါသလား?
သုံးရတာအဆငျပွပေါတယျ.။ ပွဿနာမရှိပါဘူး.။ နောကျဆုံးရသတငျးတှနေဲ့ information တှကေို မြားမြားတငျပေးစခေငျြတယျ.။ ပွညျတှငျးကားလောကအကွောငျးအရာတှနေဲ့ အစိုးရကခမြှတျထားတဲ့ပျေါလစီနဲ့ပတျသကျတဲ့ သတငျးတှတေငျပေးရငျ ပိုအဆငျပွပေါမယျ.။
- ဟုတျကဲ့ပါ၊ ခုလိုဖွကွေားပေးလို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျခငျဗြာ။
Captain ကိုအောငျမွငျ့မိုးနဲ့ ဆကျသှယျပွီး ကားအရောငျးအဝယျကိစ်စမြား ဆောငျရှကျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဖုနျးနံပါတျ - 09 731 765 08, Email: aungmyinmoe@gmail.com ကို ဆကျသှယျနိုငျပါတယျခငျဗြာ.။
Posted at: 21-05-2015 13:19 PM